Affaire de corruption à Antsiranana, l'ancien premier ministre Olivier Mahafaly entendu par le Bianco - Kolo TV du 1er mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil BIANCO Affaire de corruption à Antsiranana, l’ancien premier ministre Olivier Mahafaly entendu par...
Affaire de corruption à Antsiranana, l’ancien premier ministre Olivier Mahafaly entendu par le Bianco – Kolo TV du 1er mars 2019
Ny fanodikodinana volam-panjakana manodidina ny iray miliara ariary. Tokony nanamborana trano ao amin’ny kaominina miisa 5 ao Antsiranana faha 2, ny taona 2017. Isan’ny voasaringotra amin’ity raharaha ity ihany koa ny Minisitry ny atitany sady praiminisitra teo aloha. Fehizoro Rafaly.
Taorian’ny fanadihadiana nataon’ny Bianco, mikasika ny raharaha fanodikodinam-bolam-panjakana na subvention exceptionnel. Tokony ho an’ny kaominina miisa 5 ao Antsiranana faha 2 saingy tsy nositrahana akory. Olona 7 no notazomina teny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny Pôle anti-corruption. Benin’ny Tanana miisa 5 eo ambanin’ny fanaraha-mason’ny fitsarana ary azon’ny fitsarana antsoina amin’ny fotoana rehetra, olona 2 nampidirina amponja vonjimaika omaly hariva. Tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Primature ny iray amin’izy ireo ary mpitantana ny orinasa nahazo ny tsena tamin’ny fomba tsy nanara-dalana kosa ny iray. Mitetina iray miliara ariary ny vola voahodikodina. Raha hiverenana ny zava-nitranga, ny taona 2017 no nandray fitarainana maro ny sampan’ny Bianco any Antsiranana mikasina ny fahazoana tsenam-baro-panjakana tsy ara-dalana ho enti-manorina biraon’ny Kaominina vaovao amin’ny kaominina miisa 5 any Antsiranana faha 2, subvention izay avy amin’ny Ministeran’ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Raha ny loharanom-baovao azo, tsy nisy tolom-bidy natao tamin’ny fanatanterahana ity asa ity. Orinasa-na vehivavy iray vadina tompon’andraikim-panjakana ambony eo anivon’ny Primature no notolorana ny tsena. Raha ny fanazavana, noterana avy hatrany ireo benin’ny Tanana tokony hisitraka ny subvention exceptionnel hamindra ny vola ao amin’ny kaontin’ny orinasa any vadin’ny mpiasan’ny primature io. Ireo birao vaovao an’ny kamonina ireo izay tsy nanomboka ary tsy mbola nisy akory. Raha ny vaovao azo tamin’ny olona akaikin’ny raharaha, voasaringotra amin’ity raharaha ity ihany koa ny Minisitry ny Atitany teo aloha izay sady Praiminisitra. Ny tenany izay efa nohenoin’ny Bianco ankoatran’ny fandraisan’ny Pac an-tanana ity raharaha ity. Vinavinaina handeha eny anivon’ny Haute Cour de Justice ihany koa ny raharaha. Tsy nitondra fanazavana mikasika ity tranga fanodikodinana volam-panjaka ity ny teo anivon’ny Bianco, na ny birao mahaleotena misahana ny ady amin’ny kolikoly androany raha nanontaniana. Mitohy ny fanadiadihana hoy izy ireo, tsy hanavahana olona na antoko-politika izany; andrasana kosa ary hotaterina aminao eto amin’ny fampahalalam-baovao hatrany ny tohin’ny raharaha.
Fivarotana ny zaridainan’i Antaninarenina – Efa any amin’i Bianco ny dossier – TVM du 28 février 2019
Article précédentFamerenana ny Hasin’ny Fitsarana no tarigetran’ireo nandrato fianarana tao amin’ny Ecole nationale de la magistrature à Madagascar – TVM du 28 février 2019
Article suivantPrisons à Madagascar, le racket continue – La gazette de la grande île du 1er mars 2019
PMU Madagascar dans la toute illégalité – La gazette de la...